US/32A (7.6KW) Ndị na -emepụta ihe & ndị na -eweta ya | Ụlọ ọrụ China US/32A (7.6KW)
Azụmahịa Electric OCPP 1 ....
Ọrụ 2 * 22kw 64A EV Electric ...
16A 32A 40A 48A Ọhụrụ Ike ...
EV Nchaji Station Wall-Mo ...
Nlụpụta US ọkọlọtọ EV ...
Pịnye 1 Ọkwa 2 Wall-Mounted EV Car Charger Wallbox na nkwado ETL
Ụlọ ọrụ ozugbo China EV Charging Point, akụrụngwa chaja EV, yana ebumnuche "ntụpọ efu". Maka ilekọta gburugburu ebe obibi na nloghachi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, lekọta ọrụ onye ọrụ dị ka ọrụ ya. Anyị na-anabata ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile ka ha bịa leta ma duzie anyị ka anyị wee nwee ike nweta ihe mgbaru ọsọ mmeri. Ebumnuche anyị bụ ịzụlite ndị ahịa ihe okike nwere ezigbo ahụmịhe maka OEM/ODM Manufacturer China EV Charger.
Tụkwasịnụ ọdụ ụgbọ ala eletrik ụgbọ ala OEM nke nwere asambodo ETL
Nweta chaja ụgbọ ala OEM China, chaja ngwa ngwa, anyị na -agba mbọ maka ịdị mma, nkwalite na nrụpụta oge niile, na -agba mbọ ime anyị "ntụkwasị obi ndị ahịa" yana "nhọrọ mbụ nke ngwa ngwa ngwa ika". Họrọ anyị, na-ekerịta ọnọdụ mmeri!
ETL 7.6kw AC EV Charger Na Ocpp1.6J na ụdị nkwụnye 1
Ezi chaja China EV chaja, chaja ụgbọ ala, site na ọrụ dị elu na ọpụrụiche, anyị na ndị ahịa anyị etolitela nke ọma. N'iji sistemụ nchịkwa sayensị dị mma zuru oke, ezigbo mma na okwukwe ka mma, anyị na -enweta ọkwá dị mma wee were ọzụzụ a maka ezigbo ogo China 32A Type1 SAE J1772 EV Charger. Ọkachamara na nka na-ahụ na anyị na-enweta ntụkwasị obi mgbe niile n'aka ndị ahịa anyị n'ọrụ azụmahịa anyị. "Ogo", "ịkwụwa aka ọtọ" na "ọrụ" bụ ụkpụrụ anyị. Ikwesị ntụkwasị obi anyị na nkwa anyị na -anọgide na nkwanye ugwu na ọrụ gị. Kpọtụrụ anyị taa Maka ozi ndị ọzọ, kpọtụrụ anyị ugbu a.
AC Nchaji US/32A (7.6KW)
Chọpụta ka ngwaahịa ọhụrụ sitere na nkwonkwo ga -esi baara ụlọ, ebe ọrụ na oghere ọha ndị ọzọ uru. Ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa zuru oke zuru oke maka EV niile. N'iji plọg J1772 zuru ụwa ọnụ, chaja ụgbọ ala eletrik na-arụ ọrụ na EV & Plug-In Hybrid's na United States & Canada. Gụnyere ụdị ewu ewu dịka, Chevy Bolt, Nissan Leaf, Ford Fusion, BMW i3, Chevy Volt, Toyota Prius, Chevy Spark, Jaguar I-Pace na Audi e-tron. Ọbụna Tesla na -eji ihe nkwụnye ọkọlọtọ ya.